ဘွိုင်လာသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကို China Manufacturer
ဘွိုင်လာ Pulse Deduster,ဘွိုင်လာအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး,သွေးခုန်နှုန်းအိတ် Filter ကို
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: ဘွိုင်လာ Pulse Deduster,ဘွိုင်လာအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး,သွေးခုန်နှုန်းအိတ် Filter ကို
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး > ဘွိုင်လာသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကို
 ဘွိုင်လာသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကို
အဆိုပါဘွိုင်လာ၏ pulsate အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏အလုပ်လုပ်ကိုင်နိယာမ:
အဆိုပါဘွိုင်လာသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကိုပြာ Hopper တွေလည်း, အထက် box ကိုအလယ်တန်း box ကိုအထည်အိတ်, ပြာသန့်ရှင်းရေးနှင့်မှုတ်စက်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ အလုပ်လုပ်သောအခါ, မြင့်မားသောအပူချိန် flue ဓာတ်ငွေ့ပြာရေပုံး၏ဝင်ပေါက်ကနေပြာရေပုံးသို့စီးဆင်း။ ကြောင့်ဆွဲငင်အားအခြေချခြင်းငှါ, ကြမ်းဖုန်မှုန့်အမှုန်တိုက်ရိုက်ပြာရေပုံး၏အောက်ဆုံးထဲသို့ပြုတ်ကျမြေမှုန့် precollecting ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစား။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, လေစီးဆင်းမှု၏အလျင်နှေးနှေးဖြစ်လာ, နှင့်အနည်းငယ်ဖုန်မှုန့်လေစီးဆင်းမှု၏ပြောင်းလဲအတူအလယ်တန်း box ကိုဝင်သဖြင့်, မြေမှုန့်ပိတ်ဆို့ခံရခြင်းနှင့် hindraged မြင့်အပူချိန် filter ကိုအိတ်အသုံးပြုပုံနှင့်ဖုန်မှုန့်မှပူးတွဲပါသည် အဆိုပါ filter ကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်နှင့် filter ကိုအပြီး filtered ။ အဆိုပါဓာတ်ငွေ့လေထွက်ပေါက်မှအထက်သေတ္တာထဲသို့ filter ကိုအိတ်ဖြတ်သန်းလျက်, သွေးဆောင်မူကြမ်းပန်ကာအားဖြင့်လေထုမှဆေးရုံကဆင်းသည်။ အဆိုပါ filter ကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးပေါ်မှာစုဆောင်းမြေမှုန့်ကိုအဆက်မပြတ်တိုးမြှင့်ထားသည်။ အဆိုပါ setting ကိုအချိန်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခါ compressed လေထုအိတ်အတွင်းချုံ့လေကြောင်းအတွက် filter ကိုအိတ်ဖို့ပြောင်းနေဖြင့် pulsated နှင့်ပြာမှုန် pulsates ကြောင်းဒါကြောင့်, ထိုသွေးခုန်နှုန်း controller ကို, ထိုသွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ဖွင့်ဖို့သွေးခုန်နှုန်း controller ကို၏ sequential ကြားကာလခြင်းဖြင့်အစပျိုးနေသည် , ဒါကြောင့်သီးသန့်စစ်ထုတ်ရန်အိတ်ရုတ်တရက် filter ကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကိုတွဲမြေမှုန့်ကိုခါလိုက်ကြလိမ့်မည်, နှင့် filter ကိုအိတ်ကနေစစ်ထုတ်အိတ်လက်သည်း။ ပြာ Hopper တွေလည်းဖို့ဆေးရုံကဆင်းမြေမှုန့်ပြာရိနာစွဲတံခါးဝအဆို့ရှင်မှတဆင့်ဆေးရုံကဆင်းသည်။
1, ဘွိုင်လာသွေးခုန်နှုန်းအိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းတိုက်ရိုက်အိတ် scouring မြေမှုန့်ဓာတ်ငွေ့မြေမှုန့်အာရုံစူးစိုက်မှုလျှော့ချ, နှင့် filter ကိုအိတ်၏ဘဝအသက်တာရှည်ရှည်မြေမှုန့်ဓာတ်ငွေ့ကိုရှောင်ရှား, ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးများ၏အခန်းကဏ္ဍသောအနိမ့်စားသုံးမှုလေ, ချမှတ်နှင့် သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်။
2. ဘွိုင်လာသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကိုအတွက်အသုံးပြုအဆိုပါတံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းများအားလုံးမြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ပစ္စည်းများထားကြပါတယ်။
3. ထိုပြာမှုတ်ခြင်းနှင့်သွေးခုန်နှုန်းလျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင်ဝေးမြင့်အပူချိန် flue ဓာတ်ငွေ့ကနေနှင့်သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်၏အဆို့ရှင်ပန်းကန်၏ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ကြဉ်ကြောင်းဒါကြောင့်ပိုက်ရှညျလြားဖြစ်ပါတယ်မှုတ်။
4. ဘွိုင်လာ၏သွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကို၏အဆိုပါ filter အိတ် flue ဓာတ်ငွေ့အပူချိန် <250 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဆက်ဆံဖို့မြင့်အပူချိန် filter ကိုအိတ်ချမှတ်။
5 အိတ်အိတ်ပါးစပ် elastic တိုးချဲ့လက်စွပ်, ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်, အစိုင်အခဲများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောချမှတ်။
6. အဆိုပါ filter အိတ်အရိုးစုသည် filter ကိုအိတ်နှင့်အရိုးစုအကြားပွတ်တိုက်အားကိုလျော့နည်းစေသည့် filter ကိုအိတ်၏ဘဝအသက်တာရှည်, နှင့်အိတ်ချဘို့အဆင်ပြေသောမြို့ပတ်ရထားဖြစ်ပါတယ်။
7. အဆိုပါအထက်အိတ်လေးအိတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စဉ်ထိပ်ဖုံးတံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ အရိုးစုရေးဆွဲနေသည်ပြီးနောက်အိတ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်နှင့်အိတ်ပြောင်းလဲများ၏စစ်ဆင်ရေးအခွအေနေတိုးတက်လာနေပါတယ်။
8. ဖုန်ထိန်းချုပ်မှုအချိန်ကထိန်းချုပ်ထားသည်နှင့် filter ကိုအိတ်သတ်မှတ်အချိန်နှင့်တိုင်းသန့်ရှင်းရေးသံသရာသည်နှင့်အညီအလှည့်အတွက်သန့်ရှင်းနေကြပါတယ်။
Related Products List: ဘွိုင်လာ Pulse Deduster , ဘွိုင်လာအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး , သွေးခုန်နှုန်းအိတ် Filter ကို , မောက် Pulse Deduster , MC အမျိုးအစား Pulse Baghouse , ဆိုင်ကလုန်း Separation Deduster , စက်မှု Pulse ဂျက် Deduster , သွေးခုန်နှုန်း Deduster